Iwo matatu akanakisa mafirimu aJack Nicholson › Chikunguru 3
Kubva pamudyandigere wake wegoridhe pazasi peLakers track, Jack Nicholson achiri kuratidza simba rinoshamisa iro raaigara achipa kune vatambi vake. Dudziro dzinoonekwa mune yatove kure uye psychedelic 70s kusvika zvakanaka kusvika muzana remakore rechiXNUMX. Basa risingaenzaniswi mune yazvino Hollywood stardom umo zvakaoma kusarudza imwe firimu kana imwe.
Nicholson aive uye ndiye ese magirazi anokanganisa, antiheroes, histrionics, kuwedzeredza uye kunyangwe kupenga. Uye zvese zvakabuda zvisina kukuvara gumi mushure memakore gumi. Kudzoka nokutendeka sokunge kuti hapana chakaitika kumutsara iwoyo wekutanga muLos Angeles Staples Center yekare. Hazvifanirwe kuve nyore kugovera chigaro nemukomana achangobva kukusunungura zvachose mubhaisikopo, kana kuti akakukunda nekugona kwake kunzwira tsitsi nezvinoshamisa, ne psychopathic, nekusiyana zvachose kubva mukuita stereotypes. anotarisana nezviito zvemutsa uye zvisingaenzaniswi.
Asi zvinogona kunge zvakakosha Tom Cruise saJack Nicholson. Nokuti pasina mavara evamwe, mamwe acho aisazoita zvine musoro. Zvakadaro… tichidzokera zvachose kuna sekuru vanodiwa ve celluloid, tinosarudza akanakisa ezvakanakisa…
Top 3 Inokurudzirwa Mafirimu naJack Nicholson
Mune apotheosis yebasa rake, Jack Nicholson akaburitsa yakaipisisa yeakanyanya physiognomy yake kuti apinde muhupenzi hwakaipisisa hunofungidzirwa nevakawanda. Stephen King.
Zvakaonekwa zvichiuya. Ikoko kudiki kutizira ku "hotera inotonhorera," ine mazana emakamuri ayo uye mikoto yekapeti isingaperi, iri pakati pesango rakaoma nechando nemuridzo waro unotyisa wemhepo inoyerera yakanongedzera kunjodzi. Zvakatonyanya naJack Nicholson uyo akatouya netare yake kubvira paakanyora "One Flew Over the Cuckoo's Nest."
Uye kunyangwe vaviri vadiki vakaumbwa naJack naWendy vakanzwika sengano yeKisimusi, nyaya yacho inokurumidza kukanganisa apo dhizaini yemurume nemunyori inozopedzisira yashanduka kuita paranoia inosanganisa huipi hwakaipa, pesvedzero yekutaura uye kuwana kwekuwedzera kune pfuti dzakashata uko. mamiriro acho anotamba zvakakwana kuumba iyo claustrophobic uye "labyrinthine" yakazara iyo Kubrick ainakidzwa senguruve iri mudhaka.
Haikwanise kupotsa Stephen King mune izvi zvekutyisa nekuti bhuku iri raive nyaya yake yechitatu. Uye kunyangwe gare gare isu zvakare tinowana yakawanda fungidziro inonongedza kune mamwe vertices erondedzero, iyi yekutanga nguva yaive yese yaityisa iyo isu tese takanakidzwa nekuravira kwekupenga kwekufamba famba uchienda kuhupengo nerufu kuyedza kubuda tisina kukuvara.
Uye hongu, iyi bhaisikopo zvakare ine BSO yayo inoita kunge yakaunzwa kubva kugehena. Teerera, teerera.
Dzimwe nguva Yankee cinema inoita kunge yakatsunga kuburitsa iyo yakajeka yezvese. Sokunge kurota kweAmerica kunogona kuwedzera kunyange pamusoro pezvinotyisa zvakanyanya mukutsvaka fungidziro ine masirogani ayo asina chinhu. Muchiitiko ichi, chirwere chepfungwa muchimiro chayo chemazuva ese hachigone kuvharwa sechinhu chakanaka pasina icho chiri chaizvo icho, kuyedza kusina maturo kuviga chokwadi.
Kunze kwekunge iyo firimu iri kuridzwa naJack Nicholson mubasa rake senyanzvi yapfuura. Nokuti tsitsi dzake dzinoshamisa, sebukira rinogona kupaza nepakati peimwe danda chero nguva. Uye ipapo tsitsi dzinotishamisa kubva kune zvinoshamisa, mukutarisa kusinganzwisisike kwaNicholson uye maitiro ake ekutsamwa kune shanduko diki muhurongwa iyo pfungwa dzake dzinofunga kuenderera zvakadzikama nehupenyu hwake pakati pemaitiro ekudzipwa.
Chinhu chinonakidza ndechekuti kunze kwetambo dzakabatanidzwa dzehunhu hwaNicholson, uko kutarisisa kwake kunoratidzika kunge kuchipinda mune zvese pasina chaanosvika, isu tinopihwa tisingafungidzirwe tarisiro yemunhu. Kunyemwerera kwake kungave kusiri kwechokwadi, asi izvo hunhu hwaNicholson hunozopedzisira hwaita hunogona kuzopa hupenyu hwake hunoreva. Kunyangwe pakupedzisira vasingakwanise kunakidzwa nazvo.
Imwe inobhururuka pamusoro peiyo cuco's nidus
Imwe yeaya mazita engano akakodzera kuona. Kana bhaisikopo kana bhuku rikachembera nehukasha hwaro kunyangwe shanduko iri pachena mumagariro emagariro, imhaka yekuti vanonongedzera kune inodarika. Uye handirevi nharo huru kana mazano ekufungidzira. Iyo inodarika inogona kuve iyo inotakura imwe tsananguro zvakare kune yemazuva ese. Nekuti mibvunzo mikuru inobata pamusoro pezvinhu zvidiki zvese.
Chipatara chepfungwa umo Randle (Jack) anopedzisira achirova ari kutora chimiro semhuri iyo iyo imwe neimwe inotarisa nzvimbo yake kana kusundirwa kwairi nekuregeredza kana kuzvipira. Wese munhu anopenga kana kunyatsojeka sezvavanotarisa munyika umo zvese zvinoitika pasi penzvimbo dzakatonyanya kupenga.
Nekupenya kweasidhi kusekesa, makore makumi manomwe, chirongwa chinotitora pasi munzira dzakasiyana: kubva pakukurumidza-chiito chizere neanopikisa magamba, anti-adventures uye anti-zvese kusvika pakuongorora nezve chikonzero uye kupenga.
Tags Jack Nicholson